Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Doorashada Madaxweynaha? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Doorashada Madaxweynaha?
Hadii Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Doorashada Madaxweynaha?
Waxaan jeclaystay inaan tacliiq yar ka bixiyo natiijada Gudoomiyaha Baarlamaanku suurtagalnimada saamaynta ay ku yeelan karto tartanka Madaxweynanimada Soomaaliya, anagoo soo qaadanayna tijabooyin soo dhacay, sida uu shakhsiyan wax ka badali karo hanaanka doorashada Madaxweynaha iyo in hadiiba ay jirto cid isaga wadata oo dhaqaale ku bixinaysa, ma u sahli karaa hanashada kursiga dalka ugu sareeya?
Waxaa maalmahaan fooda nagu soo haya dhici doonta doorashada gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya oo in mudo ah la sugayey, waxaana jiray shaki badan oo ku xeeran cida u tartamaysa kadib markii Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan uu go’aansaday in kursigaan loo qoondeeyey siyaasiiyinta Koonfur Galbeed la gaaray waqtigii uu beel kale u caleema saari lahaa.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa xiligii doorashadii hore ee 2012 xildhibaanada lagu guda jiray shuruud uga dhigay xildhibaanada tartamayey in aan laysu sharixin kursiga gudoomiyaha Baarlamanka, taa badalkeedana lagu taageero isaga Musharaxnimadiisa Madaxweyne. Waxaana xusid mudan in dhamaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ay ku waafaqeen arrinkaas, balse xaalku wuxuu is badalay markii la dhaariyey xildhibaanada oo uu Xil. Idiris Dhakhtar daqiiqado kadib uga dhawaaqay musharaxnimadiisa goobta ay xaflada dhaarta ka socotay.
· Inuu haysto dhaqaale ku filan, madaama ay u baahan tahay Madaxweynaha laysu sharaxo dhaqaalo faro badan
Gudoomiye Maxamed Sh. Osman Jawaari oo ka mid ahaa xildhibaanadii dib loo soo doortay ahaana gudoomiyaha Baarlamaanka wakhtigiisu dhamaaday ayaa dheg jalaq u siin dalabka Madaxweyne Shariif Xasan, taa badalkeedana isu sharaxay xilka Gudoomiyaha Baarlamanka. Waxaa sidoo kale jira xildhibaano ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo shaaciyey in ay u taagan yihiin qabashada xilkaas, waxaa ka mid ah Xildhiban Xuseen Osmaan Xuseen iyo Xill. Maxamed Mursal oo laga yaabo inuu maanta gudbiyo araajidiisa musharaxnimo.
· Waayo aragnimadiisa shaqo iyo sida wanaagsan oo u maareeyey maamulka Baarlamaanka mudadii afarta sano ahayd, waxaa xusid mudan in maanta kulankii kowaad ee Baarlamaanku yeesheen laga heli karo qoraalka doodihii dhacay Agoosto, 24, 2012 kaydka gudoonka Baarlamaanka, taas oo aad uga duwan habka ay u shaqeeyan xafiisyada kale oo dowladda.
· Xildhibaanada cusub oo aad ugu riyaaqay maamulka fiican ee ay kala kulmeen xafiisyada gudoomiyaha Baarlamaanka, xiligii ay qaadanayeen shahaadoyinka aqoonsiga, ID card, Nuqulada Dastuurka, Habraac dhaarta iyo doorashada iyo sidii quruxda badnayd ee loo soo agaasimahay xafladii dhaarta.
Haddaba akhristow waxaan maqaalkaan uga gol leeyahay inaan dadka u bidhaamiyo in gudoomiyaha Baarlamaanka qofka noqonaya Madaxweynaha uusan jaangoyn karin, waxaa intaas dheer in dhamaan musharixiinta ugu cad cad xilka Madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamula goboleedyada ay kala dhaxayso Xil. Maxamed Sheikh Osman Jawaari xiriir saaxibtinimo iyo wada shaqayn.
Qoraalkan maaha mid ka tarjumaya Aragtida Horseed Media, balse waa mid ku kooban faalanqeynta Qoraha warbixintan.